NGOSIPỤTA ỌKA OKORO:EJIJE OMENALA DỊ OKE MKPA UGBUA-NWODO – hoo!haa!!
Abụja: A kọwaala na ejije omenala dị oke mkpa ugbua na ndụ Ndigbo maka ọnọdụ ha taa na Naịjiriya.
Dọkịnta Okwesịlịeze Nwodo, Gọvanọ chịburu Enugwu Steeti ochie ma bụrụkwa onyeisioche otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP n’ala anyị n’oge gara aga kwupụtara nkea na mmemme ngosipụta mbụ ejije ọhụrụ a kpọrọ Ọka Okoro n’ụlọ onyonyoo Genesis Cinema dị na Novare Gateway Plaza(Shoprite), Abuja n’ụbọchị Satọdee, abalị iri n’abụọ n’asaa nke ọnwa Julaị.
N’okwu ya n’oge ahụ, Nwodo gosipụtara obi ụtọ ya maka ya bụ mmemme
“Obi dị m ụtọ ịnọ ebea taa. Nke mbụ, ejije omenala dịka Ọka Okoro dị oke mkpa ugbua maka ọnọdụ Ndigbo nọ taa
“Onye amaghị ebe o si bịa agaghịkwa ama ebe ọ na-aga. N’ihi ya, ejije omenala ga-eme ka anyị ghọta onwe anyị iji mazị ebe anyị na-aga.
Ndị ọbịa ndị ọzọ pụrụ iche bịara ya bụ mmemme gụnyere Group Captain Joseph Orji (Lagoro Ezumike)(Gọvanọ ndị soja chịburu Gombe Steeti), Dọkịnta Otive Igbuzor nọchitere anya Osote Onyeisi Sineti Naịjiriya, Mazị Waziri Adio – Onyeisiụlọ ọrụ NEITI nakwa Sir Mike Ejiofor – onye bụbu onyeisi ụlọ ọrụ nchekwa DSS n’ala anyị, AVM Chukwu (OON)(Lagoro Ezumike).
Ndị nwere agba bịara mmemme ahụ gụnyekwara; AVM Chris Chukwu (Lagoro Ezumike), Air Commodore Benard Ugwueke (Lagoro Ezumike), Mazị Osita Okechukwu, onye bụbu onye nlekọta ụlọ mgbasa ozi Voice of Nigeria (VON), Ọkaiwu Nduka Ikeyi, former Attorney General and Commissioner for Justice, Enugu Steeti nakwa Ọkammụta M.Ọ. Madụagwụ kuziburu na NIPSS, Jọs ma nọrọkwa Mahadum Abuja ugbua.
N’ozi nnabata ya, Lọlọ Chinelo Ụzọigwe, Onye Nlekọta Expadoc Productions bụ ndị mepụtara ejije ahụ kọwara na obi dị ya ụtọ etu ìgwè mmadụ siri wee bịa ya bụ mmemme.
“Nkea na-egosi mmasị anyị nile nwere ịchọta asịsa banyere nsogbu nile na-echere anyị aka mgba, ọ kacha mmemina ejiri nwayọ ememina omenala anyị nakwa ihe nkea nwere ike iweta.
Ọ kọwakwara na ejije a dị nkeji iri asatọ bụ mbụ n’ime usoro ejije ha kpọrọ Unique Indigenous Stories Series n’olu bekee nke bụ maka inweta ma chekwaa akụkọ mgbe ochie pụtara ìhè maka ihe megasịrị n’obodo dị iche iche.
O kwukwara na akụkọ dịkwa ka e siri kọọ ha na mbụ, na ụlọ ọrụ mmepụta ejije ha bụ Expadoc na-emepụta ejije ndị a na-etinyeghi ha ihe. Sọọsọ ihe ha na-eme bụ ịkọzị ya etu ọ ga-esi masị ọtụtụ mmadụ.
N’agbanyeghị na ejije a bụ banyere ihe mere na ndụ ndị Nenwe dị n’okpuru ọchịchị Aninri nke Enugu Steeti, Ụzọigwe kọwara na atụrụ anya na mmadụ nile ga-amụta ihe na ya.
Chinelo anọọla na Nollywood ihe karịrị ọgụ afọ dịka onye ejije nakwa omebe ejije. O sonyewokwa n’ejije karịrị iri asaa. Ọ mepụtawokwa ejije anọ nke onwe ya.
Dọkịnta Nwodo nọkwara ebe ahụ n’udiri “a na-ekwu ekwu, a na-eme eme” were nye ụlọ ọrụ mmepụta ejije Expadoc ọrụ ịmepụtakwa ejije banyere be nna ya bụ Ukehe
Previous Post: ỊNDONESHIYA:NWOKE ATỤWALA UTOBO IME
Next Post: ONYEISI MAHADUM UNN EKELEWO GỌVANỌ UGWUANYỊ MAKA IWETARA HA MMIRI ỌṄỤṄỤ